Aragtida dheer ee Farshaxan-Dhexdhexaadinta Isku-duubnaanta ee Minnesota
Dadku waxay xiiseynayaan Minnesota oo dheeraad ah oo farshaxan-ku-saleysan xayeysiin sahlan hawlaha badanaa waxay i weydiiyaan, "Maxaa ku jira biyaha Minnesota?" Sababtuna waa arrin wanaagsan: Falanqaynta doodda (maqaallo, blog-yada, qaybaha ra'yiga, iyo shirarka) iyo horumarka lebiska iyo tuugada (dariiqyada, xaafadaha , iyo nolosha dadka Minnesotans ah ee dhabta ah), dhammaantood oo ka soo jeeda fikradda dhexe ee meelaynta naqshadeynta, waxay ku mashquulsan tahay farshaxanka Minnesota iyo horumarinta beesha.
Pillsbury House + Masraxa, Minneapolis (Sawirka: PH + T)
Sidaas, maxaa waa biyo ku dhowaad halkan?
Ereyga ku-meel-gaadhka ah ee xayeysiisku wuxuu galey gebogebada saraakiisha la soo doortay, ganacsatada ganacsadaha, milkiilayaasha ganacsiga, hoggaanka ganacsiga, iyo hoggaamiyeyaasha aan faa'iido doonka ahayn ee ka baxsan fanka iyo horumarinta bulshada. Qeexidda waxaa loo sameeyay oo dib loo sameeyay. Qorshaha lagu fulinayo hirgelinta guuleysta waa la soo dejiyaa oo dib loo soo celiyaa. Ann Markusen iyo Anne Gadwa sanadkii 2010, Qalabaynta Wax-abuurka, wuxuu bixiyaa qeexitaan oo ku lug leh wada-hawlgalayaasha kala duwan ee istiraatiijiga ah ee qaabaynta goobaha farshaxanka iyo dhaqanka, "keenaya dad kala duwan oo isugu jira si ay u dabaaldegaan, u dhiirigeliyaan, oo loo waxyoono."
Si fudud loo sheego, meeleynta hal-abuurka ah waxay dhisaysaa isbaheysi xoog leh, iskudubarid kooxeed oo ku salaysan farshaxanka iyo dhaqanka, dadka iyo dadka, si loogu dabaaldego nolol maalmeedka. Inkasta oo dhinacyada isgaadhsiinta ay muhiim u yihiin, waa arrin muhiim u ah guusha, fekerkaygu, waa in ururada farshaxanka iyo farshaxanada loola dhaqmo sidii lammaanayaal ama hoggaamiyeyaal sinnaan ah. Waxay ahayd mid muhiim u ah maaddada farshaxanka si ay cilmi-baaris u yeeshaan sida waayo-aragnimo leh, feker ahaan, iyo aqoonta sida Markusen iyo Gadwa - mid kasta oo taariikhda dheer oo ay la shaqeynayaan farshaxan - si loo xalliyo dhacdooyinka meelaynta naqshadeynta. Ka dib markii ay warbixintooda soo baxeen, si ay u kala saaraan fikradda xiisaha badan leh ee ay soo bandhigtey, doodo badan oo jaamacadeed ah ayaa fikradda ah "adeegsiga farshaxanka" si ay meel uga dhigaan kuwo aad u firfircoon - inkastoo fekerkaas aanu wax muuqda ku jirin. (Waxaan qirayaa inaan dareensanahay in aan "isticmaalayo" farshaxanno, qayb ahaan sababtoo ah dhaqankayaga kama fekerayo farshaxanka inuu yahay mid muhiim u ah hawlaha kale ee xirfadlayaasha ah; Dareenkaygu inkastoo, "isticmaalka" ee ku jira shaxdani waxay iska indhatiraysaa qodob muhiim ah oo shaqadan ka guuleysta marka farshaxanlayaashu bilawaan bilowga, ee aan lagu xirin xaqiiqda.) Farshaxanada iyo ururada farshaxanka iyo ururada dhaqanka ayaa muhiim u ah qorshaynta jaaliyada iyo horumarinta fikradda ah in ay xaddidaan meelaynta naqshadeynta. Haddii kale, waa kaliya "meelaynta".
Mural ee Fanka Juxtaposition, waqooyiga Minneapolis (Sawirka: Farshaxanada Juxtaposition)
Ma aha mid si aan toos ahayn, in shidaalku isku mid yahay ArtPlace America, kuwaas oo hantidooda ay ka mid tahay galbeedka Minnesota ee hogaamiya maareynta hal-abuurka ah ee soo jiidashada dareenka qaran: Artspace, Masraxa Bedlam, Blue Ox, Intermission Art, Farshaxanada Farshaxanka, Lanesboro Arts, Machadka Horumarinta Bulshada Asaliga ah, Isbahaysiga Farshaxanka ee New London, Tiyaatarka Pangea, Pillsbury House + Tiyaatarka, Farshaxanka Dadweynaha Saint Paul, iyo Billboard for Arts. Laba kormeer oo muhiim ah oo ku saabsan ururradan: Waxay ahaayeen hogaamiyayaal abaabulan oo hal habeen ah (waxay ku jireen tobannaan sano), waxayna ku dhejiyeen farshaxanno si firfircoon oo kufilmaamaya bartamaha shaqadooda.
Kama hadlayo ururadan, laakiin waxaan ku siin karaa aragti asalka ah ee asalka ah ee McKnight ee taageeridda nashqadeynta hal-abuurka farshaxanka, iyadoo si kooban u eegaysa seddaxdii sano ee la soo dhaafay shaqadayada. 1980-yadii. Sannadkii 1980, aqoonsaday taageerada fannaaniinta shakhsi ahaaneed ayaa muhiim u ahaa bulshada hodanka ah iyo kuwa farsamada casriga ah, gudigeenu waxay dejiyeen Barnaamijka "McKnight Artist Fellowships". Sannad kasta illaa daraasiin fara badan oo farshaxaniin ah oo ku saabsan mabaa'diida badani waxay helayaan isugeyn ah $ 25,000. (Waqtigaas waxaa jiray labo aasaas oo kale oo MN ah oo taageera sawirada farshaxanimada: Bush iyo Jerome). Go'aanka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in la dhiso maamulada macaamilada ee ururada adeegga sanadka ama ururada bulshada - ka caawinta sidii ay u sii wadi lahaayeen ururadan marka ay soo baxeen. Waxay ahayd go'aan si toos ah loogu xidhay asaasaha William McKnight ee aaminsan in, dhinacyada iyo qaybaha, dadka ugu caansan ee u dhow shaqada waxay ku jirtaa booska ugu fiican ee ay u koraan. Maanta, Minnesota waxay hoy u tahay ururada adeega farshaxanka oo ka badan dawlad kale.
Eeg magaalada hoose ee Lanesboro, koonfur-bari Minnesota (Sawirka: Magaalada Lanesboro)
1990-yadii. Kadibna, 1990-kii, aqoonsiga barnaamijka farshaxanka McKnight ayaa xooga saarayay iyadoo la adeegsanayo nooca deeqaha ay samaysay. Qaar badan ayaa taageerayay aragti farshaxanka shakhsi ahaan loogu talagalay shirkadda qoob-ka-cayaarka, ama xaflad, ama xarun farsamo ee farshaxanka. (1991-dii Neal Cuthbert wuxuu ku biiray aasaaska barnaamijka farshaxanka ugu horeeya, wuxuu barnaamijka ku tilmaamay "maalgelin farshaxan oo leh muraayadda horumarinta bulshada.") Waxay ahayd xilligaas gudaheed ee farshaxanka lagu soo bandhigay aragtidooda aan faa'iido doon ahayn oo kaliya maaha inuu kobciyo guryaha farshaxanimada laakiin waxay ahaan doontaa hoyga farshaxanka ee joogtada ah. McKnight wuxuu inta badan ahaa kan ugu horreeya ee bixiya taageerada guud ee hawlaha ururada cusub sida kuwaan. Waxay door weyn ka ciyaareen samaynta bay'ada farshaxan ee Minnesota, firfircooni ah, noolaan, mid siman, iyo dhaqaale ahaan kala duwan (tilmaamayaasha dabiiciga ah ee ka soo baxa wada xaajoodka meelaynta naqshadeynta).
2000madii. Iyadoo taageereysa aragga farshaxanka iyadoo loo marayo taageerada guud ee hawlgalka, kali maaha inuu furo rikoodhid, wuxuu siinayaa saldhig adag oo ururada ay bilaabi karaan dhisid waarta iyo saameyn muddo dheer ah. Qaar ka mid ah waxa taageerada McKnight ka caawisay inay suurtagal noqoto:
Intermedia Arts ' Hal abuurnimada hal abuurnimada, hal abuurnimo ku saleysan farshaxanka oo lammaaneya shaqaalaha waaxda Magaalada Minneapolis iyo farshaxan yahannada bulshada
Boodhadhka Farshaxanka ' Kaga bax, oo ah mashruuc isboorti oo heer qaran ah oo la aqoonsan yahay ayaa hormood ka ahaa khadka tareenka cusub ee tareenka cusub ee St. Paul
Pillsbury House + Tiyaatarka gelinta waxqabadyo farshaxan oo asal ah oo loo adeegsado dhammaan dhinacyada guryaha dejinta bulshada
Lanesboro Arts hoggaaminta habka loo bedelayo magaalada oo dhan ee Lanesboro galay xarun farshaxaneed, taasoo ka dhigaysa hoggaamiye qaran oo ka dhexdhexaadiyay mashaariicda mashaariicda miyiga ah
Duqa magaalada St. Paul Chris Coleman ayaa rinjiyeynta caanaha loo yaqaan 'Irrigate stencil' (raajada)
Anigu waxaan noqday maamulaha barnaamijka labaad ee McKnight ee 2007, weligiina marwalba waxaan qabtay aniga oo mas'uul ka ah inaan dhiso matxafka dhaxaltooyada ah ee dhaxaltooyada ah. Sida lagu qeexay hadafkii barnaamijkii dhowaan la cusboonaysiiyey - oo sheegaya "Minnesota waxay ku fiicnaaneysaa marka ay farshaxannadu ku riyaaqayaan" - waxaan rumaysanahay in farshaxannadu ay muhiim u yihiin bulshada caafimaadka leh iyo firfircoon. Maalgalinta farshaxankeena ma ahan mid si gaar ah diiradda loo saarayo meeleynta hal-abuurka ah, laakiin waxaan diirada saareynaa qaababka taageerada ee farshaxanada shaqada si ay ugu guuleystaan hawlahooda. Meelaynta wax-soo-saarka ahi waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhismahaas. Farshaxanada Minnesota waa jaangooyooyin, abaabulayaal, iyo hogaamiyeyaal ahaanba, sida muhiim u ah tayada nolosheena gobolka sida xirfadlayaasha qaybaha kale. Waxaan rumaysanahay in taariikhda uu muujin doono sanadka 2011, marka McKnight uu ku biiray mid ka mid ah 14 maaliyadeed oo ka qayb galaya ArtPlace America, wuxuu ahaa mid kale oo ah isbedelka horumarinta ee naga dhaxeeya taageerada fanaaniinta. (Barnaamijka Farshaxanka ee la shaqeeya McKnight's Barnaamijka gobolka iyo beelaha maalgashigaan.)
Sidaa darteed, ma haystaa jawaab su'aashii asalka ahayd, "Maxaa ku jira biyaha?" Ma aha run ahaantii. Biyaha our sameeyo Mool dheer oo Minnesota ku yaal - Mississippi ayaa halkan ka bilaabmaysa - laakiin waan hubaa inaysan jirin wax caqli ah. Su'aasha dhab ahaantii waa inay noqotaa, "Maxaannu bartay?" Dhamaan jilbaha iyo quruxda wax lagu naqshadeynayo, waa inaanu fiirinno ciyaarta dheer iyo sawirka weyn. Ma dhacdo habeeyn, mana dhici doonto iyada oo aan la sii wadin taageerada. McKnight, jawaabtayada su'aasha ah "Maxaannu baranay?" Ayaa weli ah isbeddel ku yimaada isla mowqifka fudud oo aan isku mid ahayn oo gudigeenu aqoonsaday oo naga go'an marka ay abuurayaan barnaamijka isqorista ee '80s, iyo waxa Artta America muujinayso shaqadoodii hore ee fekerka: fannaaniintaas waxay muhiim u yihiin nolosha bulshada iyo horumarka.